Uyilo loyilo - Imagazini yoyilo
Igumbi Lokubonisa, Ukuthengisa, Ivenkile Yeencwadi
Igumbi Lokubonisa, Ukuthengisa, Ivenkile Yeencwadi Iphefumlelwe yinkampani yendawo ukuyila indawo yokugcina iincwadi ezinzileyo, esebenza ngokupheleleyo kwiphepha elincinci, iRED BOX ID isebenzise umxholo 'wencwadi evulekileyo' ukuyila uhlobo olutsha lokuthengisa oluxhasa uluntu lwendawo. Ifumaneka eVancouver, Canada, ziiNcwadi zaBantwana zeHlabathi kuqala igumbi lokubonisa, ivenkile ethengisa iincwadi yesibini, kunye nevenkile yesithathu online. Umahluko okhaliphileyo, ulingano, isingqisho kunye nemibala yemibala utsala abantu ngaphakathi, kwaye wenze indawo enamandla kunye nolonwabo. Ngumzekelo omkhulu wendlela uluvo lweshishini olunokuphuculwa ngayo kuyilo lwangaphakathi.
Ukuvuselelwa Kwedolophu ITahrir Square ngumqolo wembali yezopolitiko zase-Egypt kwaye ke ngoko ukuvuselela uyilo lwazo lweedolophu yinto yezopolitiko, yokusingqongileyo kunye neyezentlalo. Isicwangciso sokusebenza esikhulu siquka ukuvala ezinye izitrato kwaye uzidibanise kwisikwere esele sikhona ngaphandle kokuphazamisa ukuhamba kwetrafikhi. Iiprojekthi ezintathu emva koko zenziwa ukulungiselela ukonwaba kunye nezorhwebo kunye nesikhumbuzo sokumakisha imbali yezobupolitika yase-Egypt. Isicwangciso sithathele ingqalelo indawo eyaneleyo yokuhambahamba kunye neendawo zokuhlala kunye nomgangatho wendawo eluhlaza ophakathi ukuze wazise umbala esixekweni.
Indawo Kawonke-Wonke Isikhuthazo esingemva kolu luyilo luthando ngokulula kunye nokuqonda okungafunekiyo kweMondrian kunye nesimboli ngokuthinta umlingisi kunye nobunyani obuchazwe kwi-calligraphy yembali yesikwere. Olu luyilo libonisa ubumbano oluhambelanayo phakathi kwezitayile ezixhasa umyalezo wokuba kukho ithuba lokuxuba isitayile esahlukileyo esibonakalayo siyaphikisana nokubona iliso lize ngelixa ukumba ngokunzulu kwintanda-bulumko emva kwabo kuyakubakho izinto ezifanayo ezinokubangela ubugcisa obuhambelanayo bokuba Inomdla ngaphandle kokuqonda ngokucacileyo.
Arhente Yokuthengisa Izindlu Nomhlaba
Arhente Yokuthengisa Izindlu Nomhlaba Siyila uyilo, elingaphakathi kunye nokuma komhlaba kule projekthi. Ityala yi "Arhente yokuVumelana", igama lendawo ebizwa ukuba yi- [Sky villa], ngoko yiba nomqondo ngegama elinjalo njengesiqalo. Kwaye le projekthi ikwi-Xiamen ezantsi edolophini, iimeko ezikujikeleze isiseko azilunganga, kukho amagumbi amadala kunye nendawo yokwakha, ngaphesheya kwesikolo, akukho ndawo yomhlaba ejikelezwe. Ekugqibeleni, ngombono we [Float], donsela iziko lokuthengisa kubude be-2F, kwaye wenze eyakho indawo yokubeka, indawo yokubeka inqanaba lokugcina, ngenxa yoko iziko lokuthengisa lithanda ukutsiba emanzini, kwaye iindwendwe zihamba ngaphesheya kwe-acreage enkulu echibini, nangaphesheya kumgangatho weofisi yokuthengisa, uhambe ngezitebhisi ezingasemva uye kunyuka kwiholo yentengiso. Ulwakhiwo sisakhiwo sentsimbi, uyilo lolwakhiwo kunye noyilo lwangaphakathi bafuna ukudityaniswa kunye nobumbano kubuchule.
Indlu Le projekthi yiprojekthi yelali ese-[SAC Beigan Hill International Arts Centre] kumazantsi eShanghai, kukho iziko lobugcisa eluntwini, elinikezela ngemisebenzi emininzi yenkcubeko, i-villa inokuba yiofisi okanye isitudiyo okanye ikhaya, iziko lase-scape labahlali linendawo enkulu yokugcwala echibini. , le modeli isecaleni kwechibi. Iimpawu ezizodwa zesakhiwo yindawo engaphakathi ngaphandle kweekholamu, ezinika ukwahluka okukhulu kunye nokuyila koyilo kwindawo yangaphakathi, kodwa nangenxa yenkululeko kunye nokwahluka kwendawo, ulwakhiwo lwangaphakathi, ubuchule bokuyila buhluka ngakumbi, ijiyometri eyandisiweyo dala indawo yangaphakathi, ngokuhambelana nezimvo zokuyila ezilandelwa [liZiko lobugcisa]. Umgangatho woqhekeko wolwakhiwo kunye nezitepsi eziphambili ziphakathi kwendawo yangaphakathi, ngelixa amacala asekhohlo nasekunene ziindawo zokuqhekeza kwinqanaba, ngoko ke zizonke iindawo ezintlanu zangaphakathi zezitepsi zokudibanisa indawo.
Arhente Yokuthengisa Izindlu Nomhlaba Njengokuthi "umdaniso weRibbon", onomhlaba ovulekileyo womhlaba, indawo yonke imhlophe, sebenzisa ingcinga yokuposa ifanitshala, ulwalamano unxibelelana nendawo, okona kubalulekileyo lulwalamano phakathi kodonga kunye nekhabhathi, ukudibanisa Idesika enophahla nangomhlaba, yahlula icandelo ngokwenziwa okungaqhelekanga kwejometri ngabom, kungekuphela kokugubungela ubungakanani obugqithisileyo beziphene zomthi kodwa ikwabonisa ingcinga yangoku, ibonisa umbono ojikeleze umlinganiso webhrukhwe ngokukhanya ukukhanya.
Igumbi Lokubonisa, Ukuthengisa, Ivenkile Yeencwadi Ukuvuselelwa Kwedolophu Indawo Kawonke-Wonke Arhente Yokuthengisa Izindlu Nomhlaba Indlu Arhente Yokuthengisa Izindlu Nomhlaba